Loza amin'ny sunbating tsy voafehy | Nutri Diet
Sunbathe Hetsika tena mahafinaritra izy io, saingy mety hanimba ny fahasalaman'ny olona izany amin'ny fotoana maharitra. Ny fihenan'ny masoandro tsy voafehy dia mifandray amin'ny ketrona, ny kilema ary ny homamiadan'ny hoditra.
1 Fandokoana masoandro
3 be taona
Tsara tarehy aminao ve ny hoditra vita amin'ny tanika? Eny tokoa, fa zava-dehibe ny fahalalana fa io loko volamena mahafinaritra azon'ny vatana io dia vokatry ny ratra amin'ny sosona ambony amin'ny hoditra. Mba tsy hanafainganana ny taratra ultraviolet (UV) mihantitra ny hoditra na mampitombo ny mety ho voan'ny homamiadan'ny hoditra, mampiasa sunscreen SPF 30 na avo kokoa.
Ary raha mampidi-doza amin'ny fahasalamana ny fanaovana tanna, dia tsy latsak'izany koa ny may. Mivadika mena ny hoditra ary mahatsapa fanaintainana sy mirehitra amin'ny fifandraisany ilay olona. Momba izany Fandoroana diplaoma voalohany (Tsy misy fiatraikany amin'ny sosona ivelany amin'ny hoditra ihany) ary afaka mahazo fanamaivanana amin'ny ibuprofen sy gel mangatsiaka ianao (tsara kokoa raha misy aloe vera), na dia mila fotoana fanasitranana aza eo anelanelan'ny herinandro iray sy telo, mandritra izany fotoana izany dia manakana mafy ny famoahana indray ny tara-masoandro.
Ny taratry ny masoandro dia mety hahatonga anao ho antitra noho ny fanimbana kofehy amin'ny hoditra antsoina hoe elastin. Rehefa mitranga izany dia manomboka mihena sy mivelatra izy ireo, ka mahatonga azy ireo hiseho ketrona amin'ny faritra toy ny volon-maso, handrina ary vava. Ho fanampin'izany, tsy tokony hanadino ireo fahasimban'ny masoandro hafa isika, toy ny teboka sy ny faritra maizina.
Raha te hisoroka ny main'ny masoandro ianao, ny ketrona, ny homamiadan'ny hoditra ary ny fahasimbana hafa, dia aza miala amin'ny masoandro, indrindra eo anelanelan'ny 10 ora ka hatramin'ny 16 hariva, izay rehefa matanjaka indrindra ny taratry ny masoandro. Raha ilaina mafy ny any ivelany dia ampiasao sunscreenManaova satroka sy solomaso ary sarony fitafiana ny hoditrao. Ary raha mahatsikaritra ny fiovana ny mole na ny toerana na ny ratra tsy sitrana dia mangataha hevitra amin'ny dokotera.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » soso-kevitra » Zavatra telo tokony hotadidina alohan'ny filentehan'ny masoandro tsy voafehy